Qaabka Codbixinta, Qiimaynta Ciyaartoyda Ugu Cad Cad Xidiga & Da'yarka Sanadka Premier League Iyo Xog Aad U Baahan Tahay In Aad Ogaato. - Gool24.Net
Qaabka Codbixinta, Qiimaynta Ciyaartoyda Ugu Cad Cad Xidiga & Da’yarka Sanadka Premier League Iyo Xog Aad U Baahan Tahay In Aad Ogaato.
August 7, 2020 Mahamoud Batalaale
Waxaa maanta oo jimce ahayd si rasmi ah loogu dhawaaqay liiska musharixiinta abaal marinaha sanadka ee horyaalka Premier league oo ay ka mid yihiin abaal marinaha xidigihii sanadka, da’yarkii ugu fiicnaa iyo waliba abaal marinta tababarihii ugu fiicnaa ee ay bixinayaan maamulka Premier league.
Haddaba siday u dhacaysaa codbixinta lagu kala helayo abaal marinahan? Miyay cod ku leeyihiin taageerayaasha kubbada cagtu? Waxaan sidoo kale eegi doonaa qiimayn lagu sameeyay fursada ay kala haystaan ciyaartoyda abaal marinahan ku tartamayaa.
Aan ku horaynee taageerayaasha kubbada cagta ayaa saamayn ku yeelan kara codbixinta abaal marinaha Player of the Year, Young Player of the Season iyo Manager of the Year waxaana taageerayaasha loo qorsheeyay in boqolkiiba 10% ka mid ah ay codbixinta ku yeelan doonaan.
Laakiin boqolkiiba 90% ka soo hadhay waxaa abaal marinaha Premeir league go’aamin doona guddi uu maamulka Premier league u saaray waxaana ka mid ah Ryan Giggs, Alan Shearer iyo Sir Kenny Dalglish.
Guddidan ayaa codkooda loo xisaabi doonaa boqolkiiba 90% waxaana lagu dari doonaa codbixinta taageerayaasha kubbada cagta oo boqolkiiba 10% noqon doonta.Codbixinta taageerayaasha ee abaal marinahan ayaa haddaba uu mamulka Premier league bilaabay.
Qiimaynta Kala Saraynta Abaal Marinta Da’yarka Ee Young Player of the Season
Waxaa dood badan laga keenay sababta musharixiinta abaal marinta da’yarta Premier League loogu soo daray Anthony Martial iyo Jack Grealish kuwaas oo hadda ah 25 sano jiro waana arin layaab dad badan ku noqotay.
Laakiin qiimaynta lagu sameeyay ciyaartoydan waxaa kaalinta kowaad ka galay difaaca kooxda Liverpool ee Trent Alexander-Arnold kaas oo inta ugu badan loo saadaalinayo in uu abaal marintan ku guulaysan doono halkan ayaanad kaga bogan kartaa qiimaynta kala saraynta ciyaartoydan lagu sameeyay.
Qiimaynta Kala Saraynta Abaal Marinta Da’yarka Ee Player of the Year.
Dhamaan ciyaartoyda musharixiinta ka ah abaal marinta xidiga sanadka ugu fiican Premier league ee Player of the Year waxay noqdeen kuwo xaq u yeeshay in ay liiskan ku soo baxaan laakiin qiimaynta la sameeyay waxaa kaalinta kowaad ku guulaysatay Kevin De Bruyne oo Man City wacdaro u soo dhigay.
Jordan Henderson oo ah kabtanka kooxda Liverpool ayaa qiimayntan kaalinta labaad kaga jira halka xidiga loo saadaaliyay abaal marinta da’yarkii ugu fiicnaa ee Trent Alexander-Arnold uu markale kaalinta saddexaad kaga jiro qiimaynta abaal marinta ciyaartoygii xili ciyaareedkan Premeir League ugu fiicnaa halkan ayaanad qiimaynta kaga bogan karta.
Haddaba akhriste, miyaad qiimayntan ku raacsan tahay ciyaartoyda loo saadaalinayo in ay abaal marinta xidiga iyo da’yarka ugu fiican ee Premeir League ku guulaysan doonaan?
Haa wn ku racsanahay in de brune uu noqdo xidiga sanadka sababto ah cid maanta odhan karta maaha xidig fcn ma jirto